SAWIRO:Dhaawacyo ka mid ciidankii Amisom ee Leego ku jabay | Voice Of Somalia
SAWIRO:Dhaawacyo ka mid ciidankii Amisom ee Leego ku jabay
Posted on June 29, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Qaar kamid ah Ciidamadii ku dhaawacmay Weerarkii ay Al-shabaab ku qaaday xerada ay Ciidamada ku lahaayen Deegaanka Leego ayaa la geeyay Magaalada Muqdisho.
Dhaawacyada ayaa waxaa la soo gaaarsiiyay AMISOM Level 2 Hospital kaasi oo ay Saraakiishaa Caafimaadka kulatacaalayaan caafimaadka Dhaawacyaada ay haleeshay rasaastii Alshabab.
Ambassador Epiphanie Kabushemeye oo ah Madaxa shaqaalaha AMISOM, ayaa booqday Dhaawacyada waxa ayna rajo wanaagsan ka muujiyeen bogsashada dhaawacyadaasi,balse wuxuu sheegay maskixiyan inay dhamaan qabaan “Mental Disorder”
Ciidamadaani aya ku dhaawacmay weerarkii ay Al-Shabaab Jimcihii ku qaaday xero ay ciidaada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Leego, halkaasoo ay ku dileen tiro dhan 70 askari.
Qaar kamid ah Ciidamadii ku dhaawacmay Weerarkii ay Al-shabaab ku qaaday xerada ay Ciidamada ku lahaayen Deegaanka Leego ayaa lasoo gaarsiiyay Magaalada Muqdisho.
Ambassador Epiphanie Kabushemeye oo ah Madaxa shaqaalaha AMISOM, ayaa booqday Dhaawacyada waxa ayna rajo wanaagsan ka muujiyeen bogsashada dhaawacyadaasi.
Ciidamadaani aya ku dhaawacmay weerarkii ay Al-Shabaab Jimcihii ku qaaday xero ay ciidaada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Leego, halkaasoo ay ku dileen tiro dhan 70 askari, waxa ayna Askartaani ka badbaaday dilkaasi, iyadoona rajo wanaagsan laga muujinaayo.
Taliska ciidamada shisheeye ee duullaanka kusoo qaaday Soomaaliya ayaa waxa uu shir de deg ah uga billaabanayaa magaalada Adis-ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Inkastoo an la shaacin ajandaha shirkan, ayaa haddana waxaa saraakiisha qaar ee DF laga soo xiganayaa in shirkan looga arrinsanayo khasaaraha is daba joogga ah ee isku raac raacay shisheeyaha.
Ciidamada shisheeye oo isugu jira calooshood u shaqeystayaal Soomaaliya u yimid iney lacag ka sameeyaan iyo kuwa colaad gamurtay u qaba ummada, dhulna horey uga heystay ayaa la sheegayaa inaaney isku fikrad ka ahayn dagaalka.
Cidda ugu daran ee sida weyn uga walaacsan awooda mujaahidiinta ayaa ah Xabashida, taasoo dareensan haddii shisheeyaha kale baxaan ay kusoo furmi karaan furimo badan oo aaney xamili karin.
Dhawaan ayay ahayd markii wadada xiriirisa Baydhabo iyo Afgooye ay mujahidiintu ku dileen ku dhawaad 200 askari oo u kala dhalatay wadamada Itoobiya iyo Burndi.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga natiijada kasoo bixi doonta shirkan ay taliska ciidamada shisheeye ku yeelanayaan dalka Itoobiya.
DHAGEYSO:-Qeybta 2-aad Ee Barnaamijka Taariikhda Tataarka.
DHAGEYSO:-Zakeriye Xaaji “nina dhiigiisa uma bixinayo inow guri kuu dhiso”